कुनै पनि परिकारलाई फ्याट बर्नरमा परिणत गर्ने युक्ति पत्ता लगाउनुहोस् | बेजिया
टोय टोरेस | 11/01/2022 20:00 | निर्वाह भत्ता, पोषण
वजन कम गर्न यो क्यालोरी को जलन संग, एक क्यालोरी घाटा थप्न आवश्यक छ। एक बिना अर्को केहि पनि छैन, किनकि निश्चित र स्वस्थ तरीकाले वजन घटाउनु दुबैको योगबाट जान्छ। अब त्यसै गरी डाइटिङको अर्थ आफैलाई भोकै बस्नु होइन, खेलकुद गर्नु भनेको हरेक दिन अनन्त घन्टा प्रशिक्षण गर्न आफैलाई मार्नु होइन।
तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ कि कुशल प्रशिक्षणले तपाईलाई बोसो जलाउन र वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। साथै तपाईंको आहारमा केही खानाहरू समावेश गर्दा, यसले तपाईंलाई कुनै पनि डिशलाई फ्याट बर्नरमा परिणत गर्न अनुमति दिन्छ। किनभने शरीरमा यस्तो प्रभाव पार्ने खानेकुराहरु छन् ती मध्ये हामी वजन कम गर्ने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सेवा गर्न जाँदैछौं। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कुन सहयोगीहरू छन् जसले तपाइँलाई तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ?
1 कुनै पनि डिशलाई फ्याट बर्नरमा कसरी बदल्ने
1.1 तपाईंको भाँडामा अदुवाको जरा थप्नुहोस्
1.2 सिरका ड्रेसिंग संग सलाद
1.3 आफ्नो पास्ता व्यञ्जनहरु मा झींगा थप्नुहोस्
1.4 बोसो जलाउने मसाले संग आफ्नो भाँडा सिजन
कुनै पनि डिशलाई फ्याट बर्नरमा कसरी बदल्ने
केहि खानाहरूमा पदार्थहरू हुन्छन् जसले शरीरमा थर्मोजेनिक प्रभाव सिर्जना गर्दछ, जसले तपाईंलाई बोसो जलाउन अनुमति दिन्छ, विशेष गरी पेट क्षेत्रमा। अन्य पदार्थहरूले पनि तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै ती जसले मेटाबोलिज्मलाई गति दिन्छ, उदाहरण को लागी। यी तत्वहरू प्राकृतिक रूपमा खानामा पाइन्छ। त्यो हो, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई नियमित रूपमा तपाइँको खानामा समावेश गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि डिशलाई फ्याट बर्नरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको भाँडामा अदुवाको जरा थप्नुहोस्
को जरा अदरक यो आश्चर्यजनक रूपमा शक्तिशाली छ, किनकि यसको धेरै गुणहरूको कारण यो स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक छ। यो यी मध्ये एक हो शरीरमा थर्मोजेनिक प्रभाव पार्ने खानाहरू, जसको मतलब यो हो कि यदि तपाईंले आफ्नो खानामा अदुवा थप्नुभयो भने, तपाईंले छिटो र अधिक कुशलतापूर्वक बोसो जलाउनुहुनेछ। अदुवाले खुर्सानी जस्ता अन्य खानेकुराहरू जस्तै काम गर्दछ, जसले तपाईंको शरीरको तापक्रम बढाउँछ र तपाईंलाई बोसो जलाउँछ।
तपाईंको तरकारी प्युरी र क्रीमहरूमा अदुवा थप्नुहोस्, र तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन् स्वस्थ डिनर जसको साथ तपाईले बोसो पनि गुमाउन सक्नुहुन्छ यो पनि थाहा छैन। तपाईं अन्य सामग्रीहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ र प्रभाव बढाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै बेसार वा थोरै खुर्सानी, यदि तपाईंलाई यो मसालेदार मनपर्छ।
सिरका ड्रेसिंग संग सलाद
भिनेगरमा पनि शक्तिशाली बोसो जलाउने प्रभाव छ र त्यसैले तौल घटाउनु पर्ने सबैका लागि उत्तम सहयोगी हो। यो शक्तिशाली पदार्थ बोसो जम्मा घटाउँछ, ताकि तपाईं यसलाई सजिलै संग छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। हरेक दिन सिरका ड्रेसिंग संग सलाद लिनुहोस्, तपाईं फलफूल मा आधारित अन्य संग हरियो सलाद वैकल्पिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक पूर्ण भोजन एक बोसो बर्नर मा परिणत हुनेछ।
आफ्नो पास्ता व्यञ्जनहरु मा झींगा थप्नुहोस्
झींगा, थोरै खुर्सानीको साथमा, कुनै पनि एभोकाडोको लागि एक शक्तिशाली बोसो बर्नर हो, र तिनीहरू पनि स्वादिष्ट छन्। यो कारण हो खुर्सानी मिर्चको थर्मोजेनिक प्रभावसँग झींगा प्रोटीनहरू, एक सुपर शक्तिशाली बोसो जलाउने प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्। यदि तपाईंले कागतीको एक छिपक पनि थप्नुभयो भने, तपाइँ कलेजोको कार्यमा सुधार गर्दै हुनुहुन्छ।
बोसो जलाउने मसाले संग आफ्नो भाँडा सिजन
धेरै मसलाहरूमा थर्मोजेनिक प्रभाव हुन्छ, त्यो हो, तिनीहरूले शरीरको तापमान बढाउँछन् र स्थानीय फ्याट जलाउन मद्दत गर्छन्। थप रूपमा, मसलाहरूले तपाईंलाई क्यालोरीहरू थप नगरी थप स्वादका साथ व्यंजनहरूको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ, साथै सोडियम खपत पनि कम गर्दछ। यस सन्दर्भमा केही सबैभन्दा अनुकूल मसलाहरू छन् करी, तोरी, बेसार, वा लाल मिर्च.
खानाहरू संयोजन गर्न सिक्नु भनेको स्वस्थ तरिकाले सबै कुरा खान सक्षम हुनुको कुञ्जी हो, जबकि तपाईंले वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो भोकै बस्ने बारे होइन, तर खानेकुरा सिक्ने, आफैलाई आवश्यक पोषक तत्वहरू खुवाउने बारे हो ताकि शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सकोस्। खाना, स्वाद र भूमिको स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिनुहोस्, किनभने सबैभन्दा धनी खानाहरू, फलस्वरूप, सबैभन्दा प्राकृतिक हुन्छन्।
आफ्नो भाँडालाई फ्याट बर्नरमा परिणत गर्न यी युक्तिहरूको साथ, तपाईं सजिलैसँग तौल घटाउन सक्नुहुन्छ। बोसो घटाउने आदिलाई बढावा दिन नियमित रूपमा केही खेलकुद गर्नुहोस्। तपाईंले यी बोसो जलाउने सहयोगीहरूको फाइदाहरू बढाउनुहुनेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » निर्वाह भत्ता » कुनै पनि डिशलाई फ्याट बर्नरमा परिणत गर्न चाल पत्ता लगाउनुहोस्